Chemical Machines & Equip
Pipe, Pumps Accessories
NUVO Plus သည်အိမ်တွင်းသုံး ရေသန့်စက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြင့် ရေကိုသန့်စင်ပေးသော System ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရေ၏သန့်ရှင်းမူ ၉၉.၉၉ ရာခိုင်နူန်း အထိ ရေသန့်စင်မူကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ မိသားစုအတွက်သုံးရန် သင့်တော်သော ရေသန့်စက်အမျိုးအစားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
RO Membrane Housing for Water Treatment
1.Easy operation 2. Opening: End port side port 3. Operation pressure: 300-1000psi 4. Low price, high quality 5. Long life 4&quot; FRP membrane housing FRP twisted case, durable The option of thread connection at water outlet: 1/2&quot; 3/4&quot; Thread connection at fresh water outlet: 1/2&quot;female thread SS316L halfmoon locking plate: Easy operation, safety and reliability Subassembly at head Kind of pressure: 300, 450, 1000PSI Length type: 1, 2, 3,4core The design of head connection directly will reduce the quantity of joint used for the connection of filtering film.
High Durable 4040 8040 Ss304 RO Membrane Housing
1.8-inch RO membrane housing 1 core,2cores,3cores,4cores, etc. 2. The membrane housingt tube is divided into tube, two kinds of seamless pipe. The seam automatic welding work involved forming, weld uniform, smooth, both inside and Outside surface for mirror processing. Pressure test before delivery, pressure up to 16 kg; Seamless tube pull with forging stock directly, uniform wall thickness, not easy to leak, Do mirror processing, internal and external surface before delivery pressure test, pressure up to 25 kg. 3. In and out of nozzle connection with side in side out, side in side out two; Specifications have6X4 points and4X4 points two kinds. 4. The head material is ABS, stainless steel.
Electric Paint Sprayer ဆေးမှုတ်စက်
အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း သက်သာစေပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံး ဆေးမှုတ်စက်များကို ကျွန်တော်တို့၏ ကျင်းလုံမြန်မာ Trading မှ ဖြန့်ချီ ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်လျင် 300 mL ထိ အများဆုံးဖြန်းပက်နိုင်ပြီး ပါဝါ 650W ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဆေးပုံးဆိုဒ်မှာ 800 mL ဆံ့ပြီး သင့်တော် အဆင်ပြေသောဆိုဒ် ဖြစ်သောကြောင့် သယ်ယူရလွယ်ကူစေပါသည်။ ဗို့အား သုံးစွဲမှု ပမာဏမှ 220 VAC ဖြစ်ပြီး ဆေးဖြန်းပိုဒ်အရှည်မှာ 1.5 m (5 ပေ) အရှည်ရှိပါသည်။ ဆေးဖျန်းစက်၏ အလေးချိန်မှာ 2.4 Kg သာ ရှိသောကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက အီးလ်မေလ်း သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် တို့မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူလိုပါသည်။
Factory price 1T-500T drinking water uv sterilizer for water treatment
1,High efficient sterilization: normally kill 99%-99.9% bacteria within 1 to2seconds. 2, Broad spectrum: UV rays has broadest spectrum, can kill almost all bacteria and virus. 3, No secondary pollution: don’t add any chemical agent, so cannot create secondary pollution to water and ambient environment, do not change any ingredients in water. 4, Safe and reliable to operate: traditional disinfection technology such as adopting chloride or ozone, whose disinfection agent itself are highly toxic and flammable material. While UV sterilizer has no such potential safety hazard . 5, Low maintenance fee: UV sterilizer occupiesasmall area, structure requirement is simple, so total investment is smaller. Lower in operation, it costs only half than that chlorine disinfection in kiloton water treatment.
Assessed Supplier Triwin Green6Stage Reverse Osmosis Stand RO System
မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးရေသန့်စက် ရေတွင်အဓိကပါဝင်နေသော ဓာတုပစ္စည်းများ ဓာတ်သတ္တုများနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကြောင့်လူ၏ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များမှ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ မသန့်ရှင်းသော ရေကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် လူတွင် ကျောက်တည်ခြင်း အာရုံကြောရောဂါဖြစ်ခြင်း ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းစသည့်ရောဂါပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) မှသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက် လုံးဝစိတ်ချရသော ရေသန့်ကို ရွေးချယ်သောက်သုံးရန်လိုအပ်သလို ချက်ပြုတ်စားသောက်ရာတွင်လည်းရေသန့်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ R.O ရေသန့်စနစ်သည် လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စိတ်အချရဆုံးနှင့် အတွင်ကျယ်ဆုံးသော သောက်ရေသန့် ထုတ်လုပ်သည့်နည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ထောက်ခံမှုရထားသော တစ်ခုတည်းသောနည်းစနစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာများ Magnesium Sulphate 99.5%.
ကျွန်တော်တို့ Company က Export &amp; Import Trading Company ဖြစ်ပြီး နည်းပညာများဖြင့် စနစ်တကျပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဓာတ်မြေသြဇာများကို နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ Potassium Nitrate , Soda Solvay , Magesium Sulphate, Liquorice Extract အစရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာများကို တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးကာ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာများကို အမျိူးအစားစုံစုံလင်လင်ဖြင့် တစ်နေရာတည်း ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့် ကောက်ပဲသီးနှံများကိုလည်း Export လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာ Liquorice Extract
ဒါကတော့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော ဓာတ်မြေသြဇာများဖြစ်သည်။ သဘာဝမှ ထွက်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို နည်းပညာဖြင့်ပေါင်းစပ်ကာ အဆင့်မြင့်ထားသော အကောင်းစား ဓာတ်မြေသြဇာများဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှ ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားသော Chemical များမှာ Sulfuric Acid 98%၊ Hydrochloric Acid 33-35% ၊ နှင့် Sodium Bicarbonate (Food Grade) အစရှိသော ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအမျိူးအစား စုံစုံလင်လင်ကို ကျွန်တော်တို့ Company နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာယူနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော Chemical ပစ္စည်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း အသိပေးကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့် Menthol Crystal
Msenthol Crystal များကို အစားအသောက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှာ ဟင်းခက်အမွှေးအကြိုင်များအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါ Menthol Crystal များသည် အစာစားချင်စိတ်ကို မြင့်တင်ပေးနိုင်သည်။Menthol ကို နေ့စဉ်လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို အသုံးပြုနေကြပြီး ဥပမာ - သွားတိုက်ဆေးများ၊ ခံတွင်းသန့်စင်ဆေးများ နှင့် သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျွန်တော်တို့ Company နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အမျိူးအစားစုံလင်စွာ ရရှိနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများကို အရည်အသွေး အာမခံပြီး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။ အားပေးခဲ့ကျသော မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။
ာ KDF media Smart Design Fexibleပိုက်နှင့်အတူအလတ်စားကာဗွန်ပိတ်ပင်တာားဆီးမှုfilterကိုfiltering mediaပါရှိသည်။အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာပါရှိပြီးmicrocomputerစောင့်ကြည့်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုAutomatic Self-သန့်ရှင်းရေးကိုလျပ်စစ်သုံးအခန်းထဲကစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထာပါသည်။အရည်အသွေးမြင့်ပလက်တီနမ်coatedတိုက်တေနီယမ်ကိုလျှပ်စစ်သုံးပြားသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ုံးဖြစ်သည်။ရေဖန်တီးမှုတွင်ငါးလွှာမြင့်မားစွမ်းအင်သုံးသန့်ရှင်းရေးfilter systemတပ်ဆင်ထားသည်။အားလုံးPH level အနီးစပ်ဆုံးရှိပြီးရေအရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပါသည်။
ML900 အယ်လ်ကာလိုင်း ရေသန့်စက်
Bulti-inအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၊one-touch panel operationအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးMicrocomputerစောင့်ကြည့်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုautomatic self-cleaningလျှပ်စစ်သုံးအခန်းထဲကစွမ်းဆောင်ရည်levelအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။တိုက်တေနီယမ်လျှပ်စစ်သုံးပြားcoatedငါးခုထက်သာလွန်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပလက်တီနမ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ORP rangingနှင့်water generate မှသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဓာတ်တိုးဂုဏ်သတ္တိများပေးသောsystemဖြစ်သည်။PHအဆင့်အနီးစပ်ဆုံးရှိပြီးရေအရင်းမြစ်ပေါ်မူတည်ပါသည်
Midea Water Dispenser
Midea isaglobal manufacturer of home appliances and HVAC solutions.Since its commencement as distributor for Midea household electrical &amp; electronic home appliances and air-conditioners in 2006, Midea has provided Malaysian consumers with modern, high quality Midea products. Supported by sales &amp; service centres located throughout the country, the company’s philosophy is to ensure customer satisfaction with quality products that are accessible to all Malaysian consumers.
Booster pumps For water softener ရေသန့်စက်
&quot; ထူးခြားချက်များ &quot; တာရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော pump အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလျှင် 2m3 မှ 120m3ထိထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ water softener များအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး Pump အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အဖွင့်အပိတ်အတွက် ဖိအားပေးခြင်း (သို့) ရေပေါ်တွင် ပေါ်လာသော pumpကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ခလုပ်ခုံပါဝင်သည်။ရေဖိအား တသမက်တည်းရှိရန် အတွက်ပိုင်းခြားလွှာရေစည် ပါဝင်ခြင်း။ ရေအတွက် Pressure ကိုထိန်းညှိပေးပြီး အလျှင်အမြန် ပိတ်ပေးနိုင်သော check valve ပါဝင်ခြင်း။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအား steel က်ိုအခြေခံ၍ unit တစ်ခုတည်းအနေဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။ &quot;1 year&quot; အာမခံရှိခြင်း။
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>
copyright © 2019 www.baganmart.com. All right reserved.